Romantic weekend | Kushamwaridzana Rudo | Mapeji evaravara ehurukuro
Rudo rwemavhiki mavhiki munzvimbo dzakasiyana
Rudo rwemavhiki vhiki muzvisikwa
Rudo rwemavhiki ruchiga rwunofanira kunge rwatove rwevhiki. Kutanga musi weMugovera manheru uye kuve wakabatikana neMuvhuro unouya nyaya neSvondo masikati kunounza dambudziko rinopfuura kupembera.
Pfungwa dzekupera kwevhiki
Izvo zvinoshamisa kana iwe ukatanga kutanga runyararo rworudo pamusi weChishanu manheru. Zvino, pakutanga kwezvose, kune usiku hwekurara, chero bedzi iwe uchida, purogiramu. Kumborovhe pamubhedha, zvichida nespagne kana champagne, inosanganiswa. Saka wakasimbiswa iwe unogona kufara zvizere neMugovera unouya uye unofara.
Vakaroorana pane manheru anodikanwa
Rudo rwemavhiki vhiki nehupfumi
Saka kuti hapana chinovhiringidza rudo, zvinonzwisisika kuti tisapedza vhiki yekupedzisira mumapuranga mana emadziro. Chimwe chinhu chaunogara uchicherechedza ndicho chimwe chinhu chaunogona "kungoita". Nzira yekuwana kubva pamatanda kusvika kumatanda uye usingawani runyararo rwechokwadi.
Rwendo rwekupera kwevhiki ruchida harufaniri kunge ruri kure. Munzvimbo yako pachayo kana kuti inotevera guta guru ndiro chokwadi hotera yakanaka. Kune vagari vomuguta, mahombekombe emahombekombe ekumaruwa kana imba dzakagadzikana dzevaeni kugungwa kune kuchinja kukuru kubva muguta rakakomba.
Kunyange iyo hoteli yepamusoro inogona kuva iyo kamwechete. Muzvizhinji zvedzimba idzi pane zvirongwa zvakakosha zvevakaroorana. Iwe unogona kusarudza kubva pamhando dzakasiyana-siyana dzehutano hwakagadzirwa nemabhati, masheji uye mamwe mararamiro akanaka kune iye naye. Izvi zvinogona kunakidzwa pamwe chete, zvichida muimba yako kana munzvimbo dzepachivande dzehotera.
Kana zvasvika kune hutano hwakanaka, hapasi chete maruva anonhuwira emaruva kana michero, ayo madzimai angasarudza, asiwo vane mwoyo yakadai sekushambidza mumucheka wewaini, peels nekiki kana musanganisi weuchi-munyu, iyo varume vanoita zvakanyanya.
Kana uine basa rakawanda rokuita muhotera, iwe ungasada kugara muhotera yakasununguka munguva yako yega isina nguva. Zvakadini nevechirongwa chekuda muvhiki mune an igloo? Yakaputirwa nemafuta anodziya akadziya, zvinoshamisa kwazvo kune iyo. I-igloos yakashongedzwa zvakanakisisa uye ichijekeswa nenzira isina kururama.
Imwe pfungwa ndeyokupera kwevhiki mune uswa. Hora hoteli ikozvino inowanika munzvimbo dzakawanda. Urongwa hwakadaro hunowanzosanganisira zvinwiwa zvinogamuchirwa, kutenderera kumatare edzimhosva, mabiko emagetsi emakona uye ipapo husiku husiku huri mumubhedha mukuru mune uswa hwemichero. Chikudya chamangwanani chinogadzirirwa zvitsva kubva kune zvigadzirwa zvemukati uye chakashanda panguva yaidiwa.
Kupera kwevhiki vhiki kunowanikwa muBaumhaushotel. Pazvikomo zvakakwirira, dzimba dzemiti dzakasimba uye dzakachengeteka uye hazvidi kushaiwa nyaradzo.
Imwe nzira itsva yekuda kwevhiki yekudanana inobva kuU.SA. Iko kwakange kune mahotera akakwirira kwenguva yakareba nemichina yakawanda kwazvo. Makamuri acho akashongedzwa maererano nemitemo yekurota. Mipira yekamuri muimba, nzvimbo huru dzekutamba uye huni hwemitambo dziripo mune idzi hotela, dzaivepo iye zvinowo muGermany.
Kungwara ndedzechokwadi, uye hukama hwakanaka hunotarisirwa mumba. Idzi dzimba dzine mhepo inofadza hazvibvumi vana sevaenzi, naizvozvo iwe unogona chaizvo kurarama mafungiro ake asingagadziriswi.
Kunzwa semambo kana mambokadzi: ndizvo zvinotaurwa nehotera dzakawanda dzepahotera. Munzvimbo dzakakwirira iwe unopedza mazuva e-fairytale neusiku uye unoparadzaniswa zvekupedza maererano nemitemo yese yekugadzira.
Rwendo rwekuda rwevhiki runofanirwa nenzira yakanakisisa kuti ibve kubva kune hupenyu hwose. Imba kana imba, nzvimbo yakanaka yegungwa negungwa, negungwa kana mumakomo inokukoka iwe.
Zvokudya zvakawandisa nemidziyo yakakwana nemicheka yebhedha uye zvese zvinowedzera zvayo mauto anopa. Nezvi iwe unongotora kiyi ku domicile uye unosvikira pakusimuka kworugare runoshamisa. Iwe unogona kupedza mazuva aya muimba kana pamubhedha kana kuenda kune zvisikwa. Hapana foni, kwete kombiyuta kana laptop, hapana terevhizheni uye redhiyo uye hapana foni inofanirwa kutyisidzira kubatana.
Joint inogara muzvisikwa
Inguva yekupedzisira yekufadza, kubika uye kufara pamwechete. Zvisikwa zvinotenderera musoro wako pasina uye zvinogadzirisa nzvimbo itsva nemafungiro matsva. Iwe unoteerera kutinhira kwezvinhu zvakasikwa uye unonzwa uchiri mupenyu uye zvakanaka.
Mimhanzi ndicho chikonzero chinokonzera rudo. Nokuda kwevhiki yekudanana yemavhidhiyo, unogona kushanyira kambani yekushanya nechikafu chinonaka uye kugara kweusiku muhotera yakanaka.
Chiitiko chacho chiri kutarisa mimhanzi iyo vaviri vari vaviri vanogona kukunda, kana chimwe chinhu chakatsva zvachose chavasingazivi. Inogona kuva yekare kana yekurova, pop uye dombo, kwaunogara kunze kwaro. Kunyange mimhanzi uye rudo nyaya munhandare yemitambo yakanyatsokodzera kuvhara mafungiro evanhu vane rudo.
Kana chiitiko chikaitika musi weChishanu, unogona kushandisa Mugovera unotevera zvinoshamisa kuti uite mamwe mabasa. Kuona ndege dziri mu helikopta kana mubhodhi pamusoro penharaunda iyi zviitiko zvisingakanganwiki pamwechete.
Kushanya kwenguva refu kwekushambidza kwemafuta uye nyika ye sauna uye nzvimbo yepamusoro inochengetedza pachayo mumamiriro ekunze asina kunaka. Uye kunyange rwendo rwekutengesa rinogona kuva rudo, kana iwe uri kutsvaga chimiro chakanaka chemaitiro, chaunoedza manheru muhotera.